Xusuusta boqorkii ugu dambeeyay ee saldanaddii Mughal - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Picture Courtesy – The British Library.
Image caption Sawirka kaliya ee rasmiga ah ee laga hayo boqor Bahadur Shah Zafar II, waxaana la qaaday wax yar kadib maxkamaddii la saaray 1858
Wax ka baddan muddo qarni ah waxaa la'iska hilmaamay taariikhda iyo xusuustii boqorkii ugu dambeeyay ee saldanadii xoogga badnayd ee Mughal taas oo ka talin jirtay dalalka Hindiya, Pakistan, Bangladesh, iyo Afghanistan.
Saldanadda Mughal waxa ay talin jirtay muddo 300 sano ka badan, Zafarna waxa uu ahaa boqorkii ugu dambeeyay ka hor intii aanan xukunka laga tuurin sanadkii 1857-dii xiligaas oo hormuud ka noqday "Kacaankii Hindiya" ee Ingiriiska lagula dagaalamay.
Image caption Kariteero sheeko-sawiran ah oo ku saabsan sidii loo xiray boqor Bahadur Shah Zafar
"Safar waxa uu ahaa nin mucjiso ah, gabyaa caan ah, iyo hoggaamiye muslim ah oo udub dhexaad u ahaa xiriirka wanaagsan ee dadka Hinduuga ah iyo Muslimiinta" ayuu yiri William Dalrymple oo ah taariikhyadan darsaday sooyaalka boqorka.
Image caption Goob ka tirsan furimihii dagaalka ee Delhi ee kacaankii Hindiya oo sawir gacmeed lagu muujiyay, sanadkii 1857-dii.
Labada dhinacba waxaa lagu eedeeyay xad gudubyo bini'aadanimada ka baxsan, waxaana ka mid ahaa in Ingiriiska uu si wadar ah u laayay askar badan oo gadood sameeyay, halka ciidammadii gadoodsanaane ay laayeen caruur iyo haween Ingiriis ah.
Image caption Ganjeelada laga galo madxafka Boqor Bahadur Zafar ee magaalada Yangon
Lahaanshaha sawirka Picture courtesy - The British Library
Image caption Madxafka ayaa waxaa sidoo kale yaala xusuusta xaaskii boqorka Zinat Mahal
Lahaanshaha sawirka Picture Courtesy – The British Library
Image caption Sawir gacanta lagu sameeyay oo muujinaya Boqor Zafar